Sewasew | Seeri Gadaa maal maal of ke...
Seeri Gadaa maal maal of keessaa qaba?
Seeri Gadaa dhimmoota adda addaa of keessa qaba, fakk.
Kan dhalatee lafa gahe nama
kan nama ta’e hundinuu ulfina nameenyaa qaba kkf.
Biyyi kan Oromoo hundaa haa ta’u
Laft kan gosa hundaa haata’u
Margii fi maddi kan horii hundaa haa ta’u
Dhaali abbaa ilmaaf haa ta’u
Hojjatanii nyaachuun kan hundaa haa ta’u
Horiin namaa ulfina qaba
Kan qabu kan dhabeef liqeesuun akka
Kan liqeefatee deebisuun akka
Kan biyyatti argame horii biyyaatti
Boojuun kan duultuu hundaatti
Kofoo gosaa saaquun yakka, kan saaqe du’aan adabuun akka
Abbaa fi haadha rukutuun yakka, kan rukute du’aan adabuun ofkaltiidha
Horii namaa saamuun yakka
Seeri Gadaa fayyidaa fi mirga nama dhuunfaa kabajaa gara mirga gamtaatti guddata.
Seera seeraa oliiti. Waaqayyoo kan dacheefi samii uumee, namaa fi biqiltuu maraa uumee, gooftaa hunda caaludha.
Ulfinaaf safuus waaqaaf kennuu qabana jedha.
Seera ilkee jechhun seeroota guguddoo sirn gadaa qabu jechaa dha, Isaanis Seera waaqqaa, Lafaa, Abbaa fi haadhaatti. Seeroon kun akka madda seeroota xixiqoo hundaati fudhatamu. Wagga sadeet sadeetitti yeroo seerooni xixiqoon tumaman, seerooni Ilkee kun hin jijjiramaanu, hin fooyyaa’anis. Isaan Seeroota dhaabbatoota jechaadha. Haa ta’u malee, guyyaa itti seerooni tumamaan labsaman seerooni ilkees akka seeroota haaraa tumamaaniitti uummataaf labsama.
Oromoon lafaaf (dacheef) ulfina guddaa qaba. Dacheen yoo jiraannu nu baatti, kan biqichetee nu nyaachifti, yoo duunes garaa keessa nu keeyyatti. Margaa fi bishaan kenniti, looni fi namni akka lubbuun jiraatan gargaartii. Oromoon qabeenya fi uumama dacheen qabdu ni dinqisiifata, kanaafuu seeri lafaa cimaadha.
Abbaan waaqaa gaditti kan ulfini kennamuufi dha. Sababni isaas dhalchee kunuunsee nu guddisuu qofaa osoo hin tain qabeenya fi lubbuu isaatii ol kan nu jaallatuu dha. Kanaaf seerichi abbaa kee jaalladhu jedha.
Haatii namaa ji’a sagal gadaameessatti nama baatee, cinqiidhan dhiphatee nama deessi. Xuriifi fincaan jettee osoo hin jibbin, harma hoosistee kan nama guddistuudha. Kanaaf seerii, haati ulfina gudda qabdi jedha. Namni abbaa ykn haadha ofii rukute du’aan adabama.
Dubartii fi daa’immanii eegumsi akka godhamuf seeri ni dirqisiisa. Abbaan waraa tokko hawaasa keessatti fudhatamaa fi kabaja argachuuf dursee maatii ofii keessatti nama seera maatiif ulfina kennu ta’uu qaba. Namni tokko nama guutuu kan ta’u, yoo namaaf kabaja, waaqaaf ulfina kenne, seera Gadaa yoo guutatee dha. Akka kanaanis haadha manaa seeraa rakkoon fuudhuu fi daa’imman seeran dhalatan horachuutu isa irraa eegama.
Wabii: Saba Oromoo fi Sirna Gadaa